Muxuu ku saabsanaa kulankii gaarka ahaa ee Farmaajo iyo 50 xildhibaan? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu ku saabsanaa kulankii gaarka ahaa ee Farmaajo iyo 50 xildhibaan?
Muxuu ku saabsanaa kulankii gaarka ahaa ee Farmaajo iyo 50 xildhibaan?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Xildhibaano ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo waxayna kala hadleyn Caqabadaha hortaagan in Xukunka dilka ah lagu fuliyo Askarigii ka dambeeyay dilka Alle ha u naxariistee Wasiir Cabaas Shiikh C/llaahi Siraaji.
Askariga loo xukumay dilka Wasiir Siraaj Cabaas ayaa ku xiran Xabsiga dhexe ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu xukun suge ku yahay.